Losinoostrovskaya isanqante: incazelo, ukutshalwa
Kuze kube manje, balimi Ungakhetha bona uhlobo imifino efana yini abayithandayo. Asikhulume namuhla mayelana isanqante okunempilo futhi esihlwabusayo. Kukhona izinhlobonhlobo eziningi, umsebenzi abalimi, abanye afaneleka ukukhiqizwa ekuseni, kanti abanye asetshenziselwa zokutshala, kungakangeni ubusika.
Into esemqoka izaqathe - hhayi kuphela umkhiqizo walo kanye nekhono iqhubeka kwaze kwaphela ukuvunwa esilandelayo, kodwa futhi iqiniso ukuthi kuyinto othwala carotene ne ushukela. Phela, akukho muntu, ababengeke bathande a izaqathe amnandi. Usanda ezivamile phakathi balimi isibe uhlobo Losinoostrovsky.
Losinoostrovskaya isanqante: incazelo ezihlukahlukene
Lokhu ezihlukahlukene kungokwalabo imifino maphakathi no-isizini, ngenkathi yaso ezikhulayo izinsuku 80-120. amahlamvu isanqante abe nombala omuhle oluhlaza. Impande izitshalo, ikakhulukazi ezitholakala enhlabathini, ngezinye izikhathi babonakala ebusweni kuze 4 cm. Ngo nenhlabathi ukukhanya kalula wakhipha.
Losinoostrovskaya isanqante impande has simise cylindrical, okukhulu orange umbala. Ubude bayo 15 kuya ku-20 cm, isisindo amagremu angu-100 noma ngaphezulu. Lolu hlobo kunezinzuzo elingenakuphikwa:
• Indaphundaphu kuyinto orange ngempela namanzi.
• Lo simende incane, nombala efana umbala enyameni.
• Isihloko ebusweni blunt has a chechevinochki encane.
• Nothile Kuveza afika ku-6.5 kg.
• Losinoostrovskaya izaqathe neze ukungenwa yizifo.
• nemithi stem.
• It is kahle ibekezelelwe abandayo, ngenxa ezingasetshenziswa kutshalwe, kungakangeni ubusika.
Lokhu grade ukwahlukahlukana. izimfanelo zayo ukunambitheka avumele ukusetshenziswa isanqante ingane ukudla juice nalutho.
Imigomo kanye nezinsuku ukutshala
Smooth isanqante imibhede namahlamvu obucayi Uyi gem yangempela izindawo ebukekayo ngisho kungekho isipiliyoni balimi. Carrot impande kwezitshalo ubhekwa le ohlonishwayo kakhulu emasimini ngalesi sikhathi. Jabulela isivuno esihle izithelo ezinhle bushelelezi LODWA fike ngeke banamathele imithetho kulinywe.
Omunye wemithetho zokutshala - ke sihlehlela isanqante kwezitshalo. Zakhiwa ngokulingana ngqo abalimi kanye nezinhloso ze-izici ezihlukahlukene. Losinoostrovskaya izaqathe kusukela kwezitshalo podzimnego isetshenziselwa ukuqaliswa ehlobo, isitoreji eside asifanele.
Ukuze uthole i ukukhiqiza zakuqala izaqathe kutshalwe entwasahlobo, betshala kumele kwenziwe uma inhlabathi lifudumeza kuze kufinyelele +8 degrees. Zama ukukwenza ekuqaleni, ukusebenzisa zonke umswakama enhlabathini. Ezindaweni eningizimu kuyoba ngasekupheleni kukaMashi noma ekuqaleni kuka-Ephreli. Isikhathi sokugcina ayihlwanyelayo izaqathe eningizimu - ku 20 Julayi.
Cishe wonke umuntu okungenani cottager gryadochki kancane lapho akalokothi ayikhohlwe ukutshala izaqathi. isanqante Young ubani lungaveli ngokweqile, ufuna ukunambitha namanzi futhi okumnandi impande yemifino - waya futhi wadonsa. Kodwa ukuthi ukhulele enempilo futhi amahle, kufanele ngisebenze kanzima ukuze.
Ukuze zikhule izaqathe engadini ekhaya, udinga ukwazi ukuthi ukhethe isayithi kokwehla. Inhlabathi kumele kube okuxekethile futhi evundile. I kokumethemba kangcono izaqathe uthathwa ikhukhamba, utamatisi, iklabishi, ubhontshisi nokusanhlamvu, kanye anyanisi.
On enhlabathini abampofu ukuze kutholakale isivuno esihle, awukwazi sethemba. Ukuze umquba umhlabathi, kudinga ulwazi oluthile. Kulezi zindawo lapho Ngeke kusahlwanyelwa Losinoostrovskaya izaqathe, ngonyaka wamanje akakwazi ukwenza umquba fresh. Uma wephula salo mthetho, izimpande kuthiwa branched fomu. Ngu ukukhula ngokweqile bamahlamvu, coarsening empandeni izilimo bebafundisa nitrate kubangela umthamo omkhulu nitrogen umquba.
Izaqathi iyaphendula kahle umquba aqukethe potassium ne-calcium. Ngezinye ebulilini fertilizer potassium ezisekelwe kuyoba izaqathe imnandi, tastier, isivuno salo kuzokhulisa kakhulu.
Losinoostrovskaya izaqathe: Izibuyekezo
Izaqathi lesi sigaba, banikezwe Izibuyekezo abatshali, yaziswa kakhulu ngenxa yokuthi kulezi zimfanelo: esiphundu, amnandi, nokuvuthwa, izingane abandayo ukumelana othandekayo. Labo babe hhayi onyakeni wokuqala ukhule lokhu ezihlukahlukene, yisho ngokuqiniseka ukuthi imele iyahola uhlu imifino esetshenziswa fresh ehlobo.
Caterpillar apple: izindlela emzabalazweni
Rose umgibeli Don Juan: incazelo ezihlukahlukene kanye nokubuyekeza
Indlela yokutshala amagilebhisi kusukela Isiqu kanye Pips
Swiss Rado: indlela yokwahlukanisa original kusukela isifaniselo?
Uma uphuza amanzi amaningi, kuyokwenzekani? Kungaba yingozi noma kuwusizo baphuze amanzi amaningi?
Medicine "Isoprinosine": ukubuyekezwa, umsebenzisi, isicelo ekwelapheni izingane
Drum izingane ukubeka - ithoyizi omkhulu
Apple cider uviniga ukuze kwesisindo - uyinganekwane yini noma zingenzeka ngempela?
Ukwakheka kanye nokuqukethwe caloric likabhiya
Ama-cod ase-Polish nezinye izitsha ezivela le nhlanzi
Buildings "Klondike" kusukela A to Z
"Avtostar" (eMoscow, Kirovograd ul.) Motor: Izibuyekezo ikhasimende